I-Ravensnest, i-Bears Den
UMichelle ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
Indlu ye studio yeBears Den ikwindlu enkulu. Hamba kwi-basement kunye nesango langasese. Ibhedi enkulu ye-Queen, igumbi elikhulu elinekhitshi elincinci elilula kunye nokuhamba ngebhafu. Ikhitshi elincinci elilula lineoveni yetoaster, imicrowave, umenzi weKeurig, ifriji egcweleyo kunye nesinki ephindwe kabini, ayinaluhlu/ioveni. Vula i-WI-FI, iDish satellite kunye ne-ROKU. Indawo yokuhlala kwi-patio. Iipatios ezininzi kunye neeveranda, kunye neendawo ezininzi "zokuphumla, ukwandisa kwaye ube seluxolweni".
Indawo entle ngokwenene yokuhlala. Kufuphi nedolophu kodwa yodwa kwiHaven yayo
Ndiziikhilomitha ezine emazantsi eCortez kunye neekhilomitha ezine kumntla we-Ute Mountain Casino ngaphandle kwe-Highway 160 - 491, Cortez Colorado. Kuthatha malunga nemizuzu eli-10 ukuya kumbindi wedolophu kunye nemizuzu engama-20 ukuya kumnyango weMesa Verde. Ndingaphandle kwelizwe. Iimbono eziphefumlayo kunye nentuthuzelo. Akukho zilwanyana zasekhaya zivumelekileyo.
Ndihlala kwipropathi kwindlu enkulu. Ndifumaneka kwindlu enkulu, ndithumele umyalezo okanye ngokufowuna.